दोस्रो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले निक्कै खुम्चिएको छ। वाम गठबन्धनका अगाडि निरिह झै बनेको पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकार छाड्न गठबन्धनले आग्रह गरिसकेको छ। तर, जति सहजरुपमा वाम गठबन्धनले आग्रह गरेको छ त्यति नै जटिलतामा जेलिएको छ सरकार। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकी देउवाले सरकार छाड्न नमिल्ने दावी […]
नेपालमा नेपाल आइडल, स्थानिय निकायको निर्बाचन, दशै तिहार को चर्चा सगै राजनिती बृतमा धुर्बिकरण अभियानको पनि व्यापक चर्चा छ ।पछिल्लो समयमा माओबादी केन्द्रमा भएको धुर्बिकरण धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् ।यसै सेरोफेरोमा रहेर हाल धुर्बिकरण अभियान कोरियाका सम्योजक तथा नयाँ शक्ति पार्टी कोरियाका पुर्ब संगठन बिभाग प्रमुख ,प्रचार प्रसार बिभाग प्रमुख तथा प्रबास प्रादेशिक समिती […]
मधेसकेन्द्रित विभिन्न दलबीच एकीकरण भएर एउटै दलका रुपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन त भयो, तर अस्तित्वमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसले संगठनात्मक स्वरुप लिन सकेको छैन । बरु, दलले एउटा रुप धारण गर्नुपूर्व नै आन्तरिक मतभेद चुलिएको छ । तत्कालिन मधेसकेन्द्रित घटकका अध्यक्षहरुलाई अध्यक्ष मण्डलमा चयन गर्दै, त्यसमध्येका वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुरलाई संयोजक […]
सोल।उत्तर कोरियाले युद्दको चेतावनी दिएको भोलीपल्ट गरेरो मिसाईल परिक्षण असफल भएको बताईएको छ । दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूका अनुसार उत्तरले पुर्वी समुन्द्री तटमा गरेको सो परिक्षण असफल भएको हो । हिजो मात्र उत्तरले बिशाल सैन्य परेड देखाएर युद्दको लागी तयार रहेको जनाएको थियो । तर यसबारे बृस्तित बिवरण आईनसकेको बताईएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, दक्षिण कोरिया ब्यापारिक भिसामा सन् २००६ मा कोरिया प्रवेश गर्नुभएकी जुनु गुरुङ अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद दक्षिण कोरियाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । सानो मार्ट सेन्टर खोलेर व्यवसाय शुरु गर्नुभएकी उहाँले केहि समयपछि रेष्टुरेण्ट व्यवसाय पनि आरम्भ गर्नुभयो । व्यवसायका अलवा सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय गुरुङलाई कोरिया […]
नेपालले मंगलबार मलेसियामा मकाउलाई हराउँदै एएफसी सोलिडारिटी कपको उपाधि जित्यो। एएफसीले आयोजना गरेको महादेशीय प्रतियोगिता नेपालले जितेको यो पहिलो प्रतियोगिता थियो। सन् १९५४ मा एएफसीको सदस्य बनेको नेपालले १९८२ बाट एएफसीको प्रतियोगिता खेल्न थालेको थियो। त्यसयता नेपाल फाइनलसम्म पनि पुगेको थिएन। सन् २००६ मा एएफसी च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनल पुग्नु नै नेपालको लागि ठूलो सफलता थियो। […]
तपाईहरु संविधान संसोधन गर्नकालागि तयार हुनु भएको हो ? – संविधान त हाम्रो गतिशील हो । देश, जनता, राष्ट्र, लोकतन्त्र र समाजवादको हितमा यो संविधान क्रमशः परिष्कृत परिमार्जित हुँदै नै जान्छ । अहिलेसम्म कुन देशको संविधान होला जो जनताको हित विपरित काम गरोस । यो हामीले जुनसुकै समयमा पनि आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्न सक्छौं । […]
आवद्ध त म एमालेमा नै छु यद्यपि खासै व्यस्त हुने जिम्मेवारी मलाई दिइएको छैन । मलाई केन्द्रीय सदस्य त बनाइएको छ, तर यसको भूमिका छैन । एमालेमा त्यो पनि २ सय हाराहारीको भीमकाय केन्द्रीय सदस्यको के नै काम हुन्छ र ? धेरै केन्द्रीय सदस्य एमालेमा मानार्थ छन्, त्यस्तै मानार्थ केन्द्रीय सदस्यमध्येको म पनि एक भएकाले […]
(माओवादी आन्दोलनभित्र हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ मोहन वैद्य किरणपछिका दोस्रो दार्शनिक नेताका रुपमा गनिन्छन् । दार्शनिक नेता भएपनि किरणजस्तै ओली पनि कहिल्यै प्रचण्डको नजिक रहन सकेनन्, न त अनेक घेराहरूमा बस्ने आरोप खेप्दै आइरहेका प्रचण्डले नै उनीहरूलाई खोजे । उनीभन्दा निकै कम योगदान दिएका जुनियरहरू सभासद् र मन्त्री बने पनि ओलीले त्यस्तो अवसर पार्टीमा रहँदा कहिल्यै […]